Fil d'actualités du 18/04/2019
18/04/2019 - 12:30 : MANJAKAMIADANA: Hikatona ny fahafahan'ny daholobe mitsidika rehefa manomboka ny fanamboarana ny Rova, fa ny fiangonana kosa hivoha hatrany.
18/04/2019 - 12:00 : FADINTSERANANA MALAGASY: Voatendry Tale Jeneraly Atoa Lainkana Zafivanona Ernest, araka ny tapaky ny Filankevitry ny minisitra.
18/04/2019 - 11:30 : TAZOMOKA: Ankizy miisa 7 no namoy ny ainy noho ny tazomoka tao amin'ny Kaominina Ampaharimaina Ambohimandrosoa ao amin'ny Distrikan'Amparafaravola.
18/04/2019 - 11:00 : CFM: Hidina ifotony any amin'ny faritra 22 hampahafantatra ny sata mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny vahoaka sy ny kandida ny eo anivon'ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy na ny CFM ny 24 aprily ho avy izao.
18/04/2019 - 10:30 : RALLYE PASSION: Miisa 35 ireo ekipazy handray ny fiaingana anio amin'ny 12:15 hitandahatra ao Antsirabe, ary hiatrika ny "Epreuve Spécial" Vatofotsy.
18/04/2019 - 10:00 : HAZAKAZAKA FIARAKODIA-RALLYE PASSION ANTSIRABE: Hanomboka anio 18 aprily ary haharitra telo andro ny Rallye Passion, izay tafiditra anatin'ny dingana voalohany amin'ny fiadiana izay ho tompondakan'i Madagasikara.
17/04/2019 - 11:00 : BAOLINA KITRA: Tafiakatra 18 ny baolina matin'ilay mpilalao Malagasy Carolus, izay milalao ao amin'ny Klioba Al-Adalh any Arabie Saoudite.
17/04/2019 - 10:30 : ANDRIAMPOTSY FENOARIVOBE: Olona 4 tototry ny tany no mbola tsy ao ambanin'ny tany amin'ity Kariera ao Fenarivobe Bongolava ity. 10 izy ireo no niara-tototra tao anaty lavaka sy tionelina 19m eo ho eo. Mety hatsahatra ny fikarohana ary asiana tsangambato hahatsiarovana ireo efatra tsy hita eo amin'ilay fitrandrahana volamena.
16/04/2019 - 12:00 : FRANTSA: Hanolotra 200 tapitrisa euros ho fanarenana ny Katedraly Notre-Dame de Paris izay vakoka iraisam-pirenena may omaly ny fianakaviana Arnault, mpanefoefo ao Europe ary tompon'ny marika Louis Vuitton.
16/04/2019 - 11:30 : KOLIKOLY: Olona roa no fantatra fa naiditra am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjan’ i Marofoto ao Mahajanga ny 10 aprily 2019 lasa teo. Fanaovana sy fampiasana diplaoma hosoka vesatra hanenjehana azy ireo, ka tompon’andraikitra iray avy ao amin’ny sampandraharahan’ny jono ao Boeny ary ny iray avy ao amin’ny Oniversiten’i Mahajanga no voakasik’izany.
Archive du 20190103
Nafana ny hetsiky ny 13 mey Lakrimozenina an-jatony no nirefotra
Daroka baomba mandatsa-dranomaso efa ho an-jatony no nasetrin’ny mpitandro ny filaminana maro be nirongo fiadiana ny vahoaka tetsy amin’ny Kianjan’ny 13 mey Analakely omaly alarobia 2 janoary.
Ady amin’ny tsy fahamarinana Hieli-patrana manerana ny Nosy ny tolona
Tsy mihemotra eo anatrehan’ny ramatahora sy ny fampihorohoroana ary ny fampiasan-kery ny vahoaka mitaky ny fahamarinana fa hiady hatramin’ny farany amin’ny hosoka sy ny tsimatimanota tadiavina hampanjakaina eto amin’ny firenena.
« Ecran géant » tsy navela andeha Mahana ny mpanao ratsy ve ?
Hatramin’ny farany dia nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao rehetra ny antony nandavan’ny prefen’Antananarivo Renivohitra ny hampiasana ilay fahitalavitra vaventy na “ecran géant”
Antoko TVM Ny HCC no tompon’ny teny farany
Samy nanana ahiahy mikasika ny fifidianana daholo ny rehetra hatramin’ny fihodinana voalohan’ny fifidianana ho filoham-pirenena, hoy ny filohan’ny antoko Tolon’ny Vahoaka Malagasy (TVM), Olivier Vaovolo Razafindratoho,
Fifidianana filoham-pirenena 2018 Miha miseho ny vokatry ny fanomanana kitoatoa
Miha miseho ary mitombo isan’andro ny voka-dratsin’ny hamafisan-dohan’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI, raha ny fivoaran’ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
Marc Ravalomanana Terena ho resy tsotr’izao…
Ny marina marina ihany, ary izay no takian’ny kandida Marc Ravalomanana sy ny mpiara-dia aminy manoloana ny hosoka sy halatra bevava tamin’ny fifidianana.
Madagasikara Miatrika ady ara-politika sy ara-toekarena
Nandritra ny fitondrana Ravalomanana (2002 – 2009) no nisy fientanan’ny toekarena tsara indrindra teto Madagasikara. Efa nahatratra 7,1% ny fitomboan’ny harinkarena raha toa ka 6% mahery kely ny salanisa ho an’ny kaontinanta Afrikanina.
Malagasy monina any Frantsa sy Eoropa Miray hina amin’ny mpiray tanindrazana mitaky ny fahamarinana
Naneho ny heviny manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy eto Madagasikara ankehitriny ireo teratany Malagasy monina any Frantsa sy Eoropa mivondrona eo anivon’ny fikambanana AIFM, tarihin-dRtoa Francine Ranaivo.
Kianjan’ny 13 mey Nitifitra tamin’ny bala fingotra ny Emmo reg
Henjankenjam-pihetsika ireo mpitandro ny filaminana (emmo reg) teny amin’ny kianjan’ny 13 mey omaly. Totoafo ny daroka baomba mandatsa-dranomaso, nanomboka ny maraina ka hatramin’ny 4 ora tolakandro.
Praiminisitra Ntsay Christian Raikitra ny tsindry…
Baomba lakrimozenina… no nitsena ireo olona nikasa hanamafy ny hetsika tsy fanekena ny halatra sy hosoka nandritra ny fifidianana tetsy amin’ ny kianjan’ny 13 Mey omaly maraina. Tsy navela hiaro ny safidiny ny olom-pirenena hitaky ny rariny sy ny marina satria vory mpitandro filaminana ny teny an-toerana.
AHINTSANO NY MPANGALA-BATO
Mila ahintsana tanteraka ny olona mpangala-bato, Manome modely ratsy ka dia tokony haato. Tsy olo-mendrika hitondra fa mpividy fahefana, Sady efa ratsy laza fa mpanongam-panjakana.
Air Madagascar Trosa 290 miliara ariary no nailika tao anatin’ny herintaona
« Nanefa trosa 290 miliara ariary ny orinasa ana habakabaka malagasy Air Madagascar tao anatin’ ny herintaona, ka mety ho vita tanteraka izany amin’ny martsa 2019 », hoy ny filohan’ny filankevi-pitantanana, Eric Koller.
Mpitandro ny filaminana malagasy Naverina tamin’ny maha hery famoretana azy
Doka, toraka voninkazo no nomen’ireo vahoaka nijoro hitolona ho an’ny fahamarinana tarihin’ny K 25 tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey ireo mpitandro ny filaminana nanoloana ny fihetsika nataony ny sabotsy 29 desambra 2018 teo.
Tsena hofaina amin’ny Sinoa Hiakatra 10 hatramin’ny 40% ny sarany
500 000 Ar ny hofan-trano ambany indrindra ary tafakatra 1 000 000 Ar ny ambony indrindra amin’ireny tsena lehibe hofaina amin’ny sinoa ireny (centre commercial) ka ny ambany rihana no lafo kokoa noho ny any ambony amin’ny ankapobeny.
Antsirabe Maty nosemporina tamin’ny “sachet” ilay tovovavy …
Nahitana fatim-behivavy iray tao Antsirabe tsy lavitry ny tranon’ny Ben’ny tanàna Paul Razanakolona ny alin’ny talata 01 janoary 2019, tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany.
Toetry ny andro Ambony ny maripana,ho avy ny andro ratsy
Mikasika ny mety ny ho toetry ny andro dia mety hiverina ny orana ao anatin’ny telo andro ary saika manerana ny nosy afa-tsy ny morontsiraky ny faritra Atsimo Andrefana sy Androy.
Basket Tournoi St Sylvestre Lasan’ny BTS Analamahitsy ny ondry matavy
Lasan’ny ekipan’ny BTS avy eny Analamahitsy ny ondry matavy natao amboara tamin’ny fifaninanana basikety « Tournoi St Sylvestre »
Mohamed Salah Voafidy ho mpilalao arabo mendriky ny taona 2018
Voafidin’ny “édition arabe de Goal » fanindroany ho mpilalao Arabo mendrika indrindra ny taona 2018 ilay teratany Egypsiana milalao ao amin’ny ekipa Anglisy “Liverpool” ankehitriny.
Tsy azo alevina ny fahamarinana !
Toran-kovitra tanteraka ny mpiantehatra amin’ny hosoka sy ny hala-bato satria matahotra mafy amin’ny fivoahan’ny marina.
Fampananana asa ny tanora Tokony ho laharam-pahamehana eto Madagasikara
Maro be ireo zaza, ankizy ary tanora sahirana amin’ny lafiny fampianarana ankehitrny eto amin’ny firenena.
Mpanao asa tanana Malagasy Maro ireo olana mila vahana
Tsy azo tsinontsinoavina sy hodian-tsy hita ny asa tanana satria maherin’ny roa tapitrisa amin’ny Malagasy no mivelona aminy. Mitondra vokatra ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara izany satria manome 15 % hatramin’ny 17 % amin’ny harinkarena faobe.
Lehilahy iray izay nisandoka ho zandary no nosamborin’ny polisy tao Mahajanga.
Olona miisa 5 no maty, 326 no niditra hopitaly nandritra ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao teo.
Asa an-trano Ilana traikefa na dia tsy mitaky diplaoma aza
Ilana traikefa ny asa an-trano na dia tsy ilana diplaoma aza. Anisan’ny tsiambaratelon’ny faharetan’ny asa izany amin’ny ankapobeny ankoatra ny resaka fahadiovana sy ny fahaizana mifampitondra amin’ilay mpampiasa.
Sampana mpamonjy voina Miantso ny olona ho mailo manoloana ny hain-trano
Saika ahitana hain-trano hatrany isan’andro eto an-drenivohitra amin’izao.
Vahoaka Malagasy Hararaotina amin’ny fahantrany sy ny tsy fahalalany
Mampanahy ny zavatra mety hitranga eto Madagasikara, taorian’iny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay tena nahitana hosoka sy hala-bato iny.